37 “Chokwadi mwoyo wangu unodedereswa neizvi,+Uye unokwakuka uchibva panzvimbo pawo. 2 Nyatsoteererai, kutinhira kwenzwi rake,+Nokuomba kunobuda mumuromo make. 3 Anoita kuti kuende pasi pematenga ose,Uye mheni+ yake inosvika kumigumo yenyika. 4 Kutinhira kunotevera mushure mayo;Anotinhira+ nenzwi roukuru hwake,+Uye haadzidzivisi panonzwika inzwi rake.+ 5 Mwari anotinhira nenzwi rake+ nenzira inoshamisa,Achiita zvinhu zvikuru zvatisingagoni kuziva.+ 6 Nokuti anoti kuchando, ‘Wira panyika,’+Uye anodarowo kumvura zhinji inonaya, iyo mvura yake zhinji inonaya nesimba.+ 7 Anodzivisa ruoko rwomunhu wose wepanyika kuti rurege kuita basaKuti munhu wose azive basa rake. 8 Chikara chinoenda kunovanda,Uye chinogara munzvimbo dzacho dzokuvanda.+ 9 Dutu rinobuda muimba yomukati+Uye kutonhora kunobuda mumhepo yokumusoro.+ 10 Mvura yakaita chando inovapo nokuda kwemhepo yaMwari yokufema+Uye mvura yakapararira inoramba iri panzvimbo imwe chete.+ 11 Chokwadi, iye anoremedza gore nounyoro,Chiedza+ chake chinoparadzira gore gobvu, 12 Riri kutenderedzwa nokutungamirira kwaanozviita kuti zviite basa razvoZvichienda chero kwaanozvirayira+ pamusoro penyika inobereka yepasi. 13 Anoita kuti rive shamhu+ kana kuti rivepo nokuda kwenyika yake+Kana kuti ribereke zvibereko nokuda kwomutsa wake worudo.+ 14 Haiwa Jobho, teerera izvi;Mira, ufunge nezvemabasa anoshamisa aMwari.+ 15 Unoziva here paakatarirwa nguva naMwari,+Nepaakaita kuti chiedza chegore rake chipenye? 16 Unoziva here nezvokudzikama kwemakore,+Iwo mabasa anoshamisa aIye ane zivo yakakwana?+ 17 Kuti nguo dzako dzinopisa seiNyika painova norunyararo runobva kumaodzanyemba?+ 18 Ungapambadzira matenga+ pamwe chete nayeKuti ave akaoma segirazi resimbi yakanyungudutswa here? 19 Tiudze zvatingataura kwaari;Hatingabudisi mashoko nokuda kwerima. 20 Ko iye anofanira kuudzwa kuti ndinoda kutaura here?Kana kuti pane munhu here akambotaura kuti izvo zvichazotaurwa?+ 21 Zvino havanyatsooni chiedza;Icho chinopenya chiri mumatenga,Mhepo painenge yapfuura, ikaachenesa. 22 Kubwinya kwakaita sokwendarama kunobva kuchamhembe.Kukudzwa+ kwaMwari kunotyisa. 23 Kana ari Wemasimbaose, hatina kumuwana;+Akakwidziridzwa musimba,+Haazozvidzi+ kururamisira+ nokururama+ kukuru. 24 Naizvozvo vanhu ngavamutye.+Haana hanya nevanhu vanozviti vakachenjera mumwoyo mavo.”+